Abaalmarintu waxay ka kooban tahay saddex qeybood oo kala ah; Gabyaaga ugu wanaagsan Sannadka, Gabadha ugu gabay wanaagsan Gabdhaha gabya (oo ay taageereyso hay’adda UNDP) iyo Abwaanka Da’da yar ee Sannadka. Tartanka waxaa Garsoorayaal ka noqonaya Abwaano magac & maamuus ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda.
Tartanku wuxuu u furan yahay qof walba oo Af Soomaali wax ku qori kara, waxaana lagu aqoonsan doonaa Abwaanka leh hal-abuurka ugu wanaagsan ee sannadka. Saddexda qeybood ee tartanku waxay kala yihiin: Gabayaaga ugu wanaagsan ee Sannadka, Gabadha ugu gabay wanaagsan Gabdhaha gabya (oo ay taageereyso hay’adda UNDP) iyo Abwaanka Da’da yar ee Sannadka (oo ka yar 25 sano).
Gabayada waxaa lagu soo dirayaa bogga internetka ee Hoyga Maansada Soomaaliyeed, tartanku wuxuu xirmayaa 21-ka Oktoobar. Sannadkan waxaa Garsoorayaal ka ah abwaano isugu jira kuwo waaweyn iyo kuwo hadda soo kacaya oo ay ka mid yihiin Axmed Faarax Cali (Idaajaa), Cisman Cabdullahi Guure, Moxamud Xaaji Maxamed (Tarash), Caasha Maxamud Yuusuf (Caasha-luul) iyo Xawa Jaamac Cabdi.
“Cilmi baaris ay samaysay hay’adda UNDP ayaa lagu ogaaday in dhammaan qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed ay doonayaan in codkooda la maqlo, sidaa darteed waxaan ku faraxsannahay inaan taageerno Tartanka Gabayada Soomaalida iyo gaar ahaan qaybta lagu dhiiri- gelinayo dumarka,” ayuu yiri madaxa hay’adda UNDP, Jocelyn Mason.
“Waxaa jira haween badan oo hibo u leh qoritaanka Af Soomaaliga, waxaan rajaynayaa inaan garab ku siino in codkooda la maqlo si ay u soo bandhigaan hammigooda, iyo dalabkooda ay ku doonayaan in la dhawro xuquuqda haweenka Soomaaliyeed.”
Hoyga Maansada Soomaaliyeed waa barnaamij lagu kaydiyo laguna horumariyo gabayada Soomaalida. Waxaa la daahfuray sannadka 2021. Bogga internetka https://www.hoygamaansada.com/ waxaa lagu kaydiyaa gabayada Soomaalida, waxaana lagu qabtaa Tartanka Gabayada ee Sannadlaha.
Hay’adda Qaramada Midoobay u Qaabilsan Horumarinta (UNDP) waxay ka shaqeysaa 170 dal si ay u cirib-tirto saboolnimada oo wax uga qabato sinnaan la’aanta. Waxyaabaha aan dalalka ka caawinno waxaa ka mid ah diyaarinta qorshayaasha, xirfadaha hoggaaminta, dhiirrigelinta wadashaqaynta, kobcintas hay’adaha dawladda iyo xoojinta dhabar-adaygga si loo gaaro Yoolasha Horumar Waara.
Shaqadayadu waxay u badan tahay saddex qeybood oo kala ah; gaaritaanka horumar waara, maamul wanaagga iyo nabadeynta, iyo sidii loogu dhabaradygi lahaa isbeddelka cimilada iyo musiibooyinka. www.so.undp.org